बि.सं. २१०० (अंक १७)
जेट्लिना अलिकति पागल केटी हो – उसँगको केहि दिनदेखिको संगतले उसको बारेमा मैले बनाएको धारणा यहि हो । यति हुँदाहुँदै पनि ऊ नछोइ नहुने, माया दिई नहुने र उप्रति कृतज्ञ हुनै पर्ने युवती पनि हो । उसको झर्कोफर्कोले एकैछिन पिराए पनि लामोसमयसम्म पीडा दिइरहन सक्दैन । त्यसैले उसले बेडरुमबाट बाहिर निस्किने बेलामा मलाई ब्यङ्ग्य गर्दै – “हैन हजुर अझै रेडि नभएको ? फेरि म त हजुरलाई यहि छाडेर गैदिन्छु अनि रिअलाइज गर्नुहुन्छ मेरो भ्यालू !” भने पनि मैले उसको कुरामा खास ध्यान दिईन । बरु मलाई लाग्यो – ऊ तरुनी छे । स्वभावतः उसँग तरुनो मन छ । तरुनै जोश, जाँगर र उमंग छ । छ त्यस्तै उत्साह पनि । म उमेरले निबृत्त हुन आँटेको मान्छेमा उसमा जति उत्साह कहाँ हुनु ? उसले अझै नबुझेको चुरो कुरो नै यहि हो । जब मलाई उसको बुझक्कीमा केही कमी भएको महशुुस हुन थाल्दछ, त्यतिखेर उसँगको मेरो संगत उति रुचीकर र फलदायी लाग्दैन । तर जेभएपनि उसँगको सामिप्यता मलाई मन परिहेकै हो ।
“इ हेर्नु मेरो क्याम्पिङ टुल्स !” टेबलमाथी स्लीपिङ ब्याग, टर्चलाइट, लामो डोरी र केहि स्टील स्टिक्स राख्दै उसले भनी । मैले आफूसँग स्लीपिङ ब्याग मात्र भएको भनेपछि उसले भनी – ”ह्या हजुरपनि भैहाल्यो नी ! अरु के नै चाहियो र ? टेन्ट एउटा मसँगै छ, त्यसैमा नाइट स्पेन्ड गरौंला नी ! त्यो स्लीपिङ ब्यागको के खाँचो भो र ? यस्तो कोल्ड छ यहाँ, दुई जनाले सेपरेट ब्यागमा सुतेर कहाँ सकिन्छ यो कोल्डमा ?” हाहा.. उसले कुटनीतिक हाँसो हासी । र, हन्टिङ हिल्स जानका लागि आवश्यक अन्य तयारी गर्न पट्टि लागी । मैले पनि आफ्नो तयारी गर्नपट्टि लागेँ ।
नभन्दै, मैले कोठाबाट ल्याएर आएको स्लीपिङ ब्याग थ्वात्त थुती र भनी – “लौ, उसोभए मेरो ब्याग चाँहि किन चाहियो ? हजुरको अली ठूलो पनि छ यसमा चाँहि दुबैजनालाई अलि कम्फरटेवल पनि होला । सो, मेरो चाँहि ...” आफ्नो स्लीपिङ ब्याग बैठककोठाको एउटा कुनातिर स्वाट्टै फालिदिई, म अवाँक रहेँ ! “ओ.के. लेट्स गो, माई वल्ड टाइगर ...!” उसले प्रदत्त गरेको नयाँ संज्ञा मलाई मन पर्‍यो । कम्तीमा पनि योङ ज्याकल चाँहि भनीने उसले । मेरो मनमा यस्तो लाग्यो – आखिर बुढो भएपनि बाघ त बाघै हो नी, तन्नेरी ब्वाँसो भन्दा त ! र, फोस्रो आडम्बरमा मेरो छाती फुक्दै झण्डै फुलेको बेलुन भो ! छेडखानीमा त म पनि डक्टरेट नै हो नी, भनिदिएँ – “यो खैरो डिंगोमा मिस वल्र्ड भन्दा कम्ती त देखिएकी छैनौ तिमी पनि ! कसम तिमी लास्ट सेक्सी देखिएकी छ्यौ – हाम्रो पालामा सबभन्दा बढि रुचाइएकी ऐश्वर्या भन्दा पनि सेक्सी !” यौवनकालमा केटीहरुलाई मख्ख पार्न साथीहरुबाट सापटी लिइएका केही शब्दहरुले यो बुढेसकालमा पनि काम गरे जस्तो लाग्यो । कारण, मैले फुर्काइदिदा ऊ झन बढि फुर्की । र,प्रश्न गरी – “ह्वाट डु यू थिङ्क अबाउट माई ड्रेसअप ? स्पेशल्ली द टप वन ?” ब्राको तीनचौथाई भाग देखिने गरी उसले गरेको पहिरन मलाई उती रुचेको थिएन । तर भनिदिएँ – “ओ ! त्यसको त कुरै नगर न तिमीलाई कोही तन्नेरीले देख्यो भने ठाउँको ठाउँ ठहरै हुन्छ ! दाम्मी सुट गरेको छ, सो परफेक्ट सेलेक्सन छ नी यार !” केटी मख्खै परी । मदहोशी भावमा आफूलाई एकपटक तलदेखि माथि सम्म पूरै हेरी । र, मैले भन्न नसकेको कुरा प्वाक्कै भनिदिई – “जेभएपनि मेरो ब्रेस्ट चाँहि साँच्चीकै राम्रो देखिएको छ ! बबाल सेक्सी !” मैले समर्थन जनाएँ । हामी त्यहाँबाट बाहिरियौं ।
बस स्ट्याण्डमा बस पर्खिदै गरेका हामीलाई साइकल कुदाईरहेको एउटा ठिटोले देखेर जिब्रो पट्कायो । अनि जेट्लिनातिर फर्केर फ्लाइङ किस गर्‍यो । जेट्लिना पनि के कम दाहिने हातको माझी औंला देखाइदिई । केटोले बेस्सरी पाइडल चलायो । यसो गर्दै गर्दा मोरो झण्डै साइकलबाट लडेन – सन्तुलन नमिलेर ! ठिटो ओझेल भएर गईसकेपनि रिसिदै उसले मुख खोली – “साला नन्सेन्स, कस्तो हप्याक्स रहिछ ? सुन्दरी त देख्नै नहुने !” “ह्या छाड्देउ यार, कुकुरको कुरा पनि के गर्ने ?” उसप्रति सदाशयता देखाउँदै मैले भनेँ । ऊ चुप लागी । उप्रान्त केहि बोलिने । बस पनि आइपुग्यो, हामी बसमा चढ्यौं ।